China Special Use Of Fluidized-bed Jet Mill in High Hardness Materials ifektri abakhiqizi | Qiangdi
Sebenzisa okokusebenza okukhethekile ezingxenyeni zemikhiqizo yokuxhumana ukwanelisa imfuneko yokugaya ehlukile yemikhiqizo yokuqina.
● Isondo lokuhlukanisa i-Ceramic noma i-SiO noma iCarborundum ukulingana imikhiqizo eqinile yobulukhuni obulukhuni bayo buphakeme kunensimbi.
● Ukunamathisela ishidi lobumba odongeni lwangaphakathi lwesigayo seJet.
● Ukunamathisela i-PU noma i-ceramics kusihlukanisi sesishingishane nomqoqi wothuli.
Uhlelo lokugaya i-jet luqukethe i-jet mill, i-cyclone, isihlungi sesikhwama kanye ne-fan esalungiswa. Isihluziwe, umoya osicindezelwe futhi onomfutho ukhishwa egumbini lokugaya ngombhobho womoya, okokusebenza kucindezelwa komunye nomunye ekuhlanganyeleni kokugeleza komoya kwejet ezine ephezulu futhi ekugcineni kufinywe. Ngemuva kwalokho, okokusebenza kuzohlukaniswa ngosayizi abahlukene ngaphansi kwamandla we-centrifugal kanye ne-centripetal force. Izinhlayiya ezifanelekayo eziqoqiwe ziqoqwa yisiphepho kanye nesihlungi sesikhwama, kuyilapho izinhlayiya ezingaphezulu kwamandla zizobuyiselwa egumbini lokugaya ukuze ziphinde ziguqulwe.
Amanothi: Ukusetshenziswa komoya okucindezelwe kusuka ku-2 m3 / min kuze kufike ku-40 m3 / min. Amandla wokukhiqiza ancike ezinhlamvwini ezithile zento yakho, futhi angahlolwa eziteshini zethu zokuhlola. Imininingwane yamandla wokukhiqiza kanye nobuhle bomkhiqizo kuleli shidi kwenzelwe inkomba yakho kuphela. Izinto ezehlukene zinezici ezihlukile, bese kuthi imodeli eyodwa ye-jet mill izonikeza ukusebenza okuhlukile kokukhiqiza kwempahla ehlukile. Sicela uxhumane nami ukuthola isiphakamiso sobuchwepheshe noma izilingo ngezinto zakho.
1.Precision ezinamathela bobumba, nezimo anti-bafake ulwelwesi kusuka impahla ngezigaba inqubo ukuqinisekisa ubumsulwa imikhiqizo. Ikakhulukazi efanelekayo imikhiqizo ubulukhuni, ezifana WC, SiC, SiN, SiO2 njalo njalo.
3.Ukukhuthazela: I-Ceramic noma i-SiO noma i-Carborundum ulwelwesi Kusetshenziswe ezintweni ezine-Mohs Hardness Grade 5 ~ 9. umphumela wokugaya ubandakanya kuphela umthelela nokushayisana phakathi kwezinhlamvu kunokushayisana nodonga. ukuqinisekisa ukungathintani nensimbi kulo lonke ukugaya ubumsulwa obuphezulu bokugcina.
4. Ijubane lesondo lilawulwa yisiguquli, usayizi wezinhlayiyana ungalungiswa ngokukhululeka. Isondo lokuhlukanisa lehlukanisa okokusebenza ngokuzenzakalela nokuhamba komoya ukuze kulawulwe kahle ubuhle bemikhiqizo eseqediwe.Ultrafine powder umkhiqizo uzinzile futhi unokwethenjelwa.
- Ukukhiqizwa kwemishini
- Ukuthunyelwa kwemishini nezitshalo
- Ukusekela kulo lonke umkhiqizo
- Ukutholakala kanye nokufundwa komqondo
- Isikhathi kanye nokuhlelwa kwemithombo
- Onjiniyela abaziwa
- Kusetshenziswa ubuchwepheshe bamuva
- Kusizakala ulwazi olutholwe emakhulwini ezicelo kuzo zonke izimboni
Langaphambilini Uhlobo oludumile lwe-Jet Mill
Olandelayo: Ubulukhuni High Izinto Jet Mill